Isitudiyo esinebalcony kunye nembono ebanzi eSantana - SP
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEurivaldo
Ifumaneka kwidolophana ebumelwaneni baseSantana, eSão Paulo, isakhiwo seStudio Life sinombono omkhulu weyona ndawo idumileyo kuMmandla oMntla weSão Paulo. Le ndlu ilungele iingcali kunye nabahambi abafuna ukusebenza ekhaya, okanye bachithe iintsuku ezimbalwa kwiinkongolo okanye kwimiboniso yaseAnhembi, ekufutshane kakhulu, okanye bachithe iintsuku zecarnival. Esi sakhiwo sisanda kwakhiwa kwaye sikufuphi kakhulu nezikhululo zemetro zaseSantana kunye ne-Ayrton Senna (umgca we-metro eluhlaza okwesibhakabhaka).
Ubumelwane baseSantana, eSão Paulo, ekuMmandla oMntla, ithathwa njengendawo efikeleleka ngokulula ngenxa yeempawu ezininzi: ikufutshane neMarginal Tietê kunye neendawo ezingqongileyo, njengeTucuruvi. Indawo yam ilungele abahambi okanye iingcali eziziqeshileyo ezifuna ukonwabela ukuhlala okufutshane eSão Paulo ngexesha lomnyhadala wonyaka, onje ngeefais kunye neenkongolo, iikhosi, okanye nezolonwabo. ISão Paulo sisixeko esimbaxa, kwaye inika amathuba amahle okonwabela le ntsimi. Le bane kwizitishi engaphantsi ezimbini kumgca Blue kufutshane kakhulu kwisakhiwo (Santana kunye Ayrton Senna), apho ungafumana off sikaloliwe uhambe uye indlu, ngokuba imizuzu eyi-12, okanye, ukuba unqwenela, ungakwazi ukuba sebenzisa i-UBER, intlawulo emalunga ne-R8.00, isuka kuso nasiphi na kwezi zikhululo zikaloliwe zangaphantsi. Esi sakhiwo siqhelekile kwaye abahlali banobulumko kakhulu. Undwendwe lunokuthembela kumaziko orhwebo amaninzi abekwe kufutshane kakhulu nesakhiwo (indawo yokubhaka, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezinkulu, kunye nekhemesti, indawo yokuzivocavoca, imivalo, izinto zokubhala kunye nabanye).
Ah, iSantana yindawo ebekwe kakuhle kakhulu kwingingqi yaseMantla yesixeko saseSão Paulo. Yindlela yabo baya eTucuruvi kunye nokufikelela kwabo baya kwingingqi yaseCantareira, apho ikhoyo indawo yokugcina amanzi. Yayiyingingqi esekupheleni komgaqo kaloliwe ongaphantsi kweLinha Azul, kodwa yandiswa ukuya kutsho eTucuruvi. Ineziko lokuthenga elikhulu, elineendawo zokutyela, iivenkile zasezitalatweni eziphezulu, iikhemesti, isikhululo sebhasi, kunye nendlela engaphantsi komhlaba, kunjalo. Kule mihla, ukusebenzisa i-subway kuye kwafana nemfuneko kunye nesantya.
Umbuki zindwendwe ngu- Eurivaldo
Ukufumaneka: ukususela ngo-7:00 kusasa ukuya ku-11:00 ebusuku.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santana